ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များ - နည်းပညာသည်အမြဲတမ်းနည်းပညာမဟုတ်ပါ Martech Zone
ငါဝန်ခံရတယ်, TECH ငါ့ကိုအက္ခရာလေးပေးစာလေးလုံး။ “ နည်းပညာ” ဟူသောဝေါဟာရသည်လက်တွေ့ကျသောကြောက်စရာစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြားသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်လန့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမကြာခဏအာရုံစိုက်ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများကိုလမ်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပျော်ရွှင်မှုပိုရနိုင်သည်။
တောင်မှသော်လည်း စကားလုံး နည်းပညာဂရိစကားလုံးမှလာသည် နည်းပညာ“ လက်မှုပညာ” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းကိုးကားနေကြသည် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ။ ၏စာရှုသူများ Martech Zone ဒီလယ်ပြင်များစွာသောစားပြီးအတွက်စိမ်နေကြသည်။ URL, SEO, VoIP နှင့် PPC စသည့်အတိုကောက်ဝေါဟာရများကိုကျွန်ုပ်တို့လွှင့်ပစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားဆက်စပ်မှုမရှိဟုထင်ရသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားကျယ်ပြန့်သောနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်သည်။ နည်းပညာလောကသည်ဗန်းစကားများစွာဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်လူအများကညီလာခံများတွင်ဘာပြောနေသည်ကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ မင်းဟာ“ နည်းပညာ” ထဲကိုရောက်နေပြီလို့ပြောရင်လူတချို့ကိုကြောက်သွားနိုင်တယ်။
နည်းပညာနှင့်နည်းပညာအကြားခြားနားချက်တစ်ခုကမ္ဘာရှိသည်။ နည်းပညာသည်အသုံး ၀ င်သောသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သိပ္ပံနည်းကျသဘောတရားများ၏လက်တွေ့ကျအသုံးချမှုဖြစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများသည်အလုပ်ကိုလုပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းဖို့ - ဒါဟာအရေးကြီးတယ် တယောက်ယောက် သင်၏ကားအတွင်းရှိအင်ဂျင်ပြproblemsနာများကိုမည်သို့ခွဲခြားသိနိုင်မည်ကိုသိသော်လည်းကားနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်စက်ပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အစအ ဦး ၌မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကနောက်လာမည့်အရာကိုမသိရှိပါ။ တစ်နေ့မှာ BAM၊ Google၊ Food Network နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီသည်ယှဉ်ပြိုင်သော arugula မွေးမြူရေးအတွက်အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးရန်အင်အားစုများပူးပေါင်းနေကြသည်ကိုသင်ကြားသည်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းပစ္စည်းများကိုမဝယ်ပါ။ တကယ်လား ကီးဘုတ်မရှိတဲ့စက်တစ်လုံးနဲ့ဘာလုပ်မလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကို ငါ့ကိုယ်စားစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားအသုံးပြုသောစက်ကိုငါအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
ဤမေးခွန်းများသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးနည်းပညာအသစ်ကိုသုံးပြီးမိမိကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ များတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းအချို့သဘောမျိုးရှိရန်လိုအပ်သည်။
နည်းပညာတစ်ခုပိုမိုပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှလမ်းမကြီးပေါ်ရှိလမ်းဆုံလမ်းခွကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်ကျော်လာကြသည်။ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် နားလည်ပါတယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏တောက်ပအတွက် (အိုး ငါ Facebook မှာသူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနှင့်အတူတက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အေးဆေး!) သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်အမှန်တကယ်နှိပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဒီနည်းပညာကကျွန်မတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်၊ ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်“ လုံလောက်မှုမရှိဘူး” ကိုကြောက်ရွံ့လာတယ်။
(ပုံမရ - နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်၊ သို့သော်ဂရုမစိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆူညံသံများကိုရှက်ဖွယ်ဖြစ်စေသော iPhone application များ။ )
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအသစ်တစ်ခု၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်လာပြီး၎င်းကိုသီးခြားခွဲထုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုပြသချင်သည်။ ငါအဘို့ဤ post ကိုရေးလိုက်အဖြစ် Martech Zone, ငါ HTML code ကိုအဲဒီလိုလုပ်ပြီးကိုယ်ပိုင် markup tag တွေထည့်တယ်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုသည် ပျော်စရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွမ်းကျင်တယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာတွင်လုံလောက်စွာအရည်အချင်းပြည့်မီလာပြီးမည်သို့ဖြတ်သန်းရမည်ကိုသိရန်လုံလောက်စွာနားလည်ကြသည်။ သင်အမှန်တကယ်နားမလည်နိုင် ဘယ်လို ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နည်းနည်းလေးသက်သာပြီးနည်းနည်းလေးနဲ့အဆင်ပြေချောမွေ့စွာသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံနည်းပညာသည်မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရှုပ်ထွေးပုံရပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဒါကရာထူးအားလုံးအတွက်အခက်ခဲဆုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုနည်းပညာအသေးစိတ် (ဥပမာရှာဖွေရေးအကွက်နှင့်လိပ်စာဘားအကြားခြားနားချက်) ကိုသာအနည်းငယ်နားလည်သဘောပေါက်မှသာလျှင်ပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ် ဦး ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခက်ခဲသည်။
သူတို့ကိုသူတို့တတ်ချင်သောလမ်းကြောင်း (ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုဆီသို့) လှည့်ပါ။ မဟုတ် မင်းလိုချင်တာတစ်ခု
အခန်းကဏ္ each တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းနည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ။ လူတွေကိုသူတို့ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာကိုစျေးကွက်ထဲမှာရောင်းပါ။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? လူတွေက Technology Cognition Chart မှာဖော်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းနေထိုင်နေပါသလား။